lion Archives - Saturngod
မနေ့က Lion ထွက်လာပြီ။ Lion ထွက်လာတာ ထက် ပိုပြီး တန်ဖိုးရှိတာတွေ သိလိုက်ရတယ်။ Lion download ချလိုက်ပြီလို့ ကြေငြာလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တော် အပါအဝင် အခြား မြန်မာတွေကပါ ဝယ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားတာပဲ။ Warez Site တွေမှာ ရနိုင်တယ်။ Free ရနိုင်တယ်ဆိုတာကို သိရဲ့ နဲ့ ပိုက်ဆံပေပြီးတော့ကို သုံးတာ။ Lion ကို US $29.99 ဆိုတာက စလုံး S$ 36 လောက်ပဲ ရှိတယ်။ အရမ်းကို တန်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံပေးပြီးတော့ ဝယ်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာတွေ တကယ်လည်း ဝယ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပြီး ဒုက္ခခံပြီး download ဆွဲချရတာတောင် ဝယ်ခဲ့ကြတယ်။ ဘာပဲ ပြောပြော ဒါက… Continue reading We bought it
Categorized as nothing Tagged lion, myanmar
Lion ကို ထူးမြင့်နောင် သွင်းပြီးတော့ facebook မှာ တင်ထားတဲ့ ပုံတွေပါ။ font ၂ မျိုးပါပါတယ်။ Myanmar MN နဲ့ Myanmar Sangam MN ပါ။ font ကတော့ Unicode 5.0 ဖြစ်နေတော့ လက်ရှိ စာလုံးတွေကို ကောင်းကောင်းမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ မယ့် ဆိုရင် –် နဲ့ –့ က နေရာလွဲပြီး တွေ့နေရမယ်။ font ရေးဆွဲပေးထားတဲ့ company ကတော့ Copyright (c) 2010 by Murasu Systems Sdn. Bhd. Malaysia. All rights reserved. နောက်ပြီးတော့ default keyboard ပါပါတယ်။ သို့ပေမယ့်… Continue reading Lion that made me cry
Categorized as News Tagged lion, mac, myanmar, Unicode